Vana veKidz - Galveston County Chikafu Bhangi
Dhawunirodha Chikafu Dhizaina Packet
Ndeapi vana veKidz chikafu chekutyaira akasiyana sei nemadhiraivha ezvikafu?
Vana veKidz chikafu chekutya chinobatsira kupa simba kuvana veese mazera kubatsira vamwe vana munharaunda mavo. Tichienzanisa nechaunga chikafu chinotyaira, tinokumbira chaiwo mwana hushamwari zvinhu kuti zviunganidzwe kutsigira yedu Kidz Pacz yezhizha chikafu chirongwa.
Chazvino chipo chekupa chikafu chikafu che2021 chiri Mac & Cheese inogadziriswa makapu. (chero mhando)
Ndiani anogona kutora chikamu muVana veKidz chikafu chekutya?
Chero vana vari chikamu chekirasi yechikoro, kirabhu, boka kana sangano vanogona kutora chikamu muVana veKidz chikafu chekutyaira.
Vadzidzi vanogona sei kuwana maawa ekuzvipira?
Vadzidzi vanoda maawa ekuzvipira echikoro chavo, boka, kirabhu kana sangano vanogona kuwana nguva yekuzvipira yeawa nemupiro.
Makumi mana-mapakeji eMac & Cheese makapu = 4 awa rekuzvipira basa
16 yega Mac & Cheese makapu = 1 awa rekuzvipira basa
Kwete yedare rakarairwa basa rekuzvipira.
Ini ndinonyoresa sei kutora chikamu muVana veKidz chikafu chekutyaira?
Iwe unogona kunyoresa kuti utore chikamu nekuzadza fomu rekunyoresa mu Vana veKidz Chikafu Dhizaina Packet.
Ndinoendesa kupi chipo changu?
Mipiro inogamuchirwa kuGCFB Admin Building, 213 6th St N, Texas City 77590 (yekupaka nzvimbo yekupaka iri kubva 3rd Ave N), Muvhuro - Chishanu 8am kusvika 3pm. Ndokumbirawo ufonere usati waendesa kuti uzivise vashandi.